Zimbabwe – Adamazi Blog
Zimbabwe’s founder leader and former President, Robert Mugabe is dead, aged 95. ZimLive reports that two sources in touch with the family confirmed the news on Friday. Mugabe had been sick for a while, and doctors had discontinued treatment,…
The electoral commission of Zimbabwe has declared Incumbent President, Emmerson Mnangagwa as the winner of the just concluded presidential elections in the country. Mnangagwa won 50.8 percent of the votes cast in a historic election without…
Villagers of Gwanda South in Garanyemba dam, Zimbabwe have contracted a powerful Prophet to help them capture a huge snake that has been causing them misfortune in all they do. The prophets tasked to capture the…
Wildlife authorities in Zimbabwe shot dead a large crocodile that strayed into the northern town of Hwange and blocked entry to a hospital, an official said Thursday. The crocodile took up position outside the main gate…
Mob justice was meted out to a Zimbabwean widower, Luscious Chiturumani, for disrespecting his late wife, Sibongile Mthetwa, at her funeral service by having sex with a prostitute who he claimed is his sister. The man who was given a…
Following the political problem currently being faced by president Robert Mugabe of Zimbabwe, pictures have emerged showing the lavish mansion owned by the estranged leader and his wife Grace while millions of desperate Zimbabweans face starvation.…
Jubilation In Zimbabwe As Robert Mugabe Finally Resigns (Photos)
Robert Mugabe has officially resigned – ending his 37-year rule of Zimbabwe. According to reports, the resignation came hours after Zimbabwe’s ruling party ZANU-PF presented a motion to impeach him. Dozens of Zimbabwean lawmakers celebrated in…
JUST IN: Mugabe Finally Agrees To Step Down As President Of Zimbabwe; He And His Entire Family Are On Their Way To Exile (Photos)
President Robert Mugabe has agreed to step down as president of Zimbabwe after negotiations between his representatives and those representing the military. The negotiations were held at state House after the military refused to meet with…
Zimbabwe: Soldiers Force Policemen To Sit On The Ground As Mugabe Steps Down (Photos)
According to reports filtering in from Harare, Zimbabwean leader, Robert Mugabe, has been removed from office in a bloodless military coup which brought to an end his 37-year rule. Soldiers took control of Zimbabwe’s ZBC state…
Three women gang rape a pastor in Zimbabwe
THREE women have appeared before a court accused of gang raping a pastor who went round to their home to demand money they owed him. Western Commonage Magistrates Court in Bulawayo, Zimbabwe, heard how the holy…